Tag: Ciyaaraha | Sagal Radio Services
Tartanka Ciyaaraha Degmooyinka Gobolka Banaadir oo shalay si rasmi u furmay
Tartanka Ciyaaraha degmooyinka Gobolka Banaadir ayaa shalay si rasmi ah waxaa uu uga furmay garoonka kubadda cagta ee Stadium Conis ee degmada C/casiis.
Ciyaartoyda Jubbaland oo u soo baxay Finalka Koobka Maamul goboleedka
Sagal Radio Services • News Report • July 23, 2016
Xulka matalaya Jubbaland ayaa u soo baxay Finalka Koobka Maamul goboleedyada, kadib markii ciyaartii Sema Finalka ay rigoorayaal uga adkaadeen ciyaartoyda Gobolka Banaadir oo tartanka marti gelinaya.
Ciyaartoyda Hiiraan iyo Sh/dhexe oo u soo gudbay Semifinalka (Sawirro)
Sagal Radio Services • News Report • July 21, 2016
Xulka Shabelaha dhexe iyo Hiiraan ayaa noqday xulkii ugu dhibco badan helay tartanka ciyaaraha maamul goboleedyada dalka oo ka socda magaalada Muqdisho kadib markii uu 1 iyo 0 ugaga badiyay xulka Galmudug.
Daawo Sawirada Real Madrid oo markii 11aad ku guuleysatay Horyaalka Yurub
Sagal Radio Services • News Report • May 29, 2016
Kooxda Real Madrid ee ka dhisan dalka Spain ayaa ku guuleysatay markeedii 11-aad koobka Champions League ka dib markii ay rigoore 5-3 ay uga badisay kooxda Atletico Madrid ciyaar aad u adkeyd oo lagu kala baxay daqiiqadahii loogu talogalay barbaro 1-1 ah sidoo kalana aan wax goolal ah la iska dhalin soddon daqiiqo oo dheeraad oo lagu daray.
Gool uu iska dhaliyay Jordi Alba oo caqabad ku noqday guushii ay raadineysay Barcelona, una horseeday guuldaro
Kooxda Barcelona ayaa ka faa’ideysan weyday guuldaradii dhabarka loo saariyay Real Madrid, isla markaana ula wareegto hogaanka, waxaana guusha Real Sociedad u soo hoyay daafaca Barcelona Jordi Alaba oo iska dhaliyay gool daqiiqadihii hore ee qeybtii hore ciyaarta.